बालुवाटारमा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला सुरु, प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने तयारी ! – Tufan Media News
बालुवाटारमा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला सुरु, प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने तयारी !
७ पुष २०७७, मंगलवार १४:०१
काठमाडौं, ७ पुष । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला सुरु भएको छ । बैठक केहि समयअघि सुरू भएकाे हाे ।
साेमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बिहान ९ बजे बैठक बोलाएको थियाे । आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची बनाउन थालेपछि बैठकमा ढिलाइ भएको हाे । ओलीले बोलाएको बैठकमा ओली समूहका सहित पूर्व माओवादी निकट टोपबहादुर रायमाझीसहितका केही नेतापनि सहभागी रहेको बताइएको छ ।
अर्कोतर्फ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले दिउँसो १ बजे बैठक बोलाएको छ । दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने उद्देश्यले आज केन्द्रीय कमिटी आह्वान गरेका हुन् । बैठकका लागि उपत्यकाबाहिर रहेका दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्य काठमाडौंमा भेला हुँदै छन् ।
प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसकेकाे छ ।
पार्टी एकता टुंगिन नपाउँदै प्रचण्डले एकता भंग गरेको अभियोगसहित निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने तयारी ओली पक्षको तयारी छ । प्रचण्डसहित अरू केहि नेतालाई पनि कारबाही गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने सम्भावना रहेको स्राेत बताउछ ।